Somaliland oo kala fur furid ka dhex bilowday gudaha Buuhoodle & Ciidamo goostay
HARGEYSA(P-TIMES)- Iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay sii xoogaysanayeen dhaq dhaqaaqyada Somaliland ay ku doonayso in ay ku qabsato magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxaa dhinac socday hawlgalo ciidan oo ay wadeen cutubyo ka tirsan ciidamada Jabhadda SSC.
Jabhadda SSC oo dhamaadka sanadkii hore lagaga dhawaaqay magaalada Buuhoodle ayaa Somaliland ka qabsaday deegaanka Caro Weyn oo ciidamo malayshiyaad ah u joogeen, halka ay ka qorshaysteen duulaan ka dhan ah Somaliland.
Jabhaddani oo loo sameeyey difaacida deegaanka iyo xoreynta goboladda Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa waxa ay saldhig ka samaysatay gudaha magaalada Buuhoodle.
Saraakiisha ciidamada Jabhadda SSC ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin dagaal ka dhan ah Somaliland, waxaaana Somaliland dhankeeda iyaduna ay wadaan qorshe ay ku doonayso in ay ku qabsato magaalada Buuhoodle.
Qorshahani oo ah mid soo taxnaa tan iyo sanadkii hore ayaa Somaliland xiligani waxa ay ku wajahaysaa Buuhoodle xeelad dagaal iyo mid siyaasadeed si ay u qabsato magaalada Buuhoodle.
Saraakiil iyo ciidamo ka tirsan Somaliland ayaa u taxaytay kala fur furida Jabhadda SSC oo ciidamo hor leh ay ka goosteen, waxaana taas badalkeeda ay bilowday in dhaqaale badan ay u diyaarsato Buuhoodle si ay u qabsato.
Bilowga bisha koowaad Saddex ee sanadkani ayaa Somalilad ay isku diyaarinaysaa qabsashada Buuhoodle, waxaana hada ay kala fur furid ku haysaa bulshada Buuhoodle iyo ciidamadeeda si ay si sahlan u qabsato.